ICarlisle Central, Indawo efanelekileyo. Igumbi labucala.
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguJoanna-Bella
Wamkelekile eCarlisle. Awungekhe ufumane indawo esembindini kakhulu kunendlu yethu.
Eli ligumbi elikumgangatho ophantsi, ngaphambili kwepropathi, ngokufanelekileyo igumbi elihlala undwendwe olunye, kodwa linebhedi ephindwe kabini ekumgangatho ophezulu. Iindwendwe ezi-2 zilungile kodwa unokufikelela kuphela ebhedini kwicala elinye.
Indlu enkulu yedolophu embindini weCarlisle, ejongene nesikhululo somlilo esidala kwaye ikufutshane nenqaba yembali. Ihotele ijongeka kwaye ivakale, kodwa ngeqhezu leendleko.
Umgama omfutshane ukusuka ezivenkileni kunye nobomi basebusuku, indawo enkulu yokumisa iibhasi ezininzi kunye nesikhululo sikaloliwe.
Endlini unegumbi elisezantsi elithandekayo, kulapho igumbi loluntu kunye nekhitshi likwakhona, kumgangatho wokuqala ligumbi lakho lokuhlambela elineshawa.
Indlu ifikeleleka ngebhokisi yokutshixa ekhuselekileyo, kwaye onke amagumbi omntu ayatshixwa. Andihlali kwizakhiwo, kodwa ndinokufikelelwa ngamaxesha amaninzi.
Kukho iicafe ezimbini ezintle ngaphakathi komzuzu wokuhamba, malunga nendlu kwiSikhululo soMlilo esiDala, kwaye ezantsi kwendlela eAdelines Cafe. Ngaphaya edolophini, kukho iintlobo ngeentlobo zeekhefi kunye neeresityu, okanye ukuba uyathanda ungasebenzisa ikhitshi kwaye uzenzele isidlo sasekhaya esimnandi.
4.78 out of 5 stars from 172 reviews
4.78 · Izimvo eziyi-172
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi172
Indlu yethu imi kanye kumbindi weCarlisle, idolophu entle enamabali amathathu. Kukho intlawulo yeeyure ezingama-24 kunye nepaki yemoto ebekwe emva kwendlu, kunye neyure yokupaka indawo yediski (phakathi kwe-8am-6pm ngaphandle kula maxesha ukhululekile ukuba upake ngexesha lokuphumla) umgama omfutshane.
Uninzi lwezinto eziluncedo zasekhaya zisemnyango wakho, kwaye zinokuhanjiswa ngqo emnyango.
Umbuki zindwendwe ngu- Joanna-Bella
Hi, I'm a mum of four wonderful kids and one furbaby. I love cleaning, cooking, travelling, dining out, wine and reading, not that I get time for much of any of it.
Ndiyafumaneka ukuba ndiqhagamshelwe ngenkonzo yemiyalezo ye-app/yewebhusayithi, i-imeyile kunye neselfowuni inokubonelelwa ngesicelo.